WINDOSE7ရုရှားအပေါ်အရက် 120 အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
အရက် 120% 2.0.3.10221
အဆိုပါ AutoCAD အတွက် drawing အခါသင်ကွဲပြားခြားနားသောဖောငျ့ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ စာသား၏ဂုဏ်သတ္တိများဖွင့်လှစ်, အသုံးပြုသူဖောင့်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်စာသားကိုအယ်ဒီတာများ dropdown list ကိုမတှေ့နိုငျပါသညျ။ ပြဿနာကဘာလဲ? ဤအစီအစဉ်အတွက်, သင်သည်သင်၏ပုံဆွဲရန် add ကိုကူညီနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတွက်အသိပေးချက်ရှိ၏လုံးဝမဆိုစာလုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့ AutoCAD အတွက် font ကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
AutoCAD အတွက်ဖောင့်ကို install လုပ်နည်း
ယင်းသော graphical AutoCAD အတွက် text field ထဲမှာဖန်တီးပါ။
ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တက်ဖတ်ရန်: AutoCAD အတွက်စာသားမထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို
စာသားမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ palette မှာကြည့်ရှုပါ။ ဒါဟာဖောင်ရွေးချယ်ရေးတစ် function ကိုမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်တစ် parameter သည် "ပုံစံ" လည်းမရှိ။ စတိုင်များ - ထိုဖောင်ရှိပါတယ်ရာတို့တွင်စာသားကိုအဘို့ဤပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအစုံ။ သငျသညျသစ်တစ်ခုစာလုံးနှင့်အတူစာသားဖန်တီးချင်လျှင်, သင်, အပြင်, ကိုဖန်တီးရန်သစ်တစ်ခုစတိုင်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပြုမိရဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ။
မီနူးဘားမှာ "Format ကို" နှင့် "စာသားပုံစံ" ကိုနှိပ်ပါ။
ပေါ်လာပြတင်းပေါက်မှာ "ဟု New" ကိုနှိပ်ပါနှင့်စတိုင်၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သစ်ကိုစတိုင်ကော်လံကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့် drop-down list ထဲက font ကို assign ။ "Apply" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပိတ်။ "
တနည်းကား, စာသားကို select နှင့်ကျွန်တော့်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြရသော Properties ကို pane ထဲကအတွက်စတိုင် assign ။ သငျသညျစာသားကိုစာလုံးပြောင်းလဲမြင်လိမ့်မည်။
AutoCAD စနစ်ကတစ်ဦး font ကိုထည့်သွင်းခြင်း
အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်: AutoCAD အတွက် Keyboard ကို shortcuts တွေကို
ဖောင့်စာရင်းမလိုအပ်ပါလျှင်, သို့မဟုတ်သင် AutoCAD Third-party developer အတွက်ဖောင့်ကိုထည့်သွင်းရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, သင် AutoCAD ဖောင့်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲရန်အ font ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။
၎င်း၏တည်နေရာကိုရှာဖွေသည့်အစီအစဉ်ကို setting များကို၎င်း, "ဖိုင်များ" tab ကိုသွားပါ, ထိုစာလိပ် "Path ကိုပံ့ပိုးမှုဖိုင်မှတ်တမ်း 'ဖွင့်လှစ်ရန်။ ပုံရိပ်နှစ်သက်တဲ့ဖိုင်တွဲကိုလိပ်စာသတ်မှတ်ပါတယ်ကြောင့် string ကိုမှတ်သားသည်။
အင်တာနက်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖောင်တွင် Download လုပ်. ဖော AutoCAD နဲ့ဖိုင်တွဲဖို့ကကော်ပီကူး။
ယခုတွင်သင်သည် AutoCAD မှဖောင့်ထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုသိသော။ ထို့ကြောင့်ကအစီအစဉ်တွင်မပါလျှင်ဥပမာ, ရေးဆွဲထားကြပါတယ်သော font ကို gost, download, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: သခင ဓၾကယ Due Won Kyawl : G Fatt Official Lyric (နိုဝင်ဘာလ 2019).